AUDIO: Dhageyso khudbadii madaxweyne Faroole ee maalinta ciida uu jeediyey – SBC
AUDIO: Dhageyso khudbadii madaxweyne Faroole ee maalinta ciida uu jeediyey
Posted by editor on August 31, 2011 Comments
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa wuxuu ka jeediyey fagaarihii lagu oogay salaada ciida, isagoo khudbadiisa oo dhinacyo taabanaysay kaga hadley arimaha amaanka, siyaasada & xaalad guud ee Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyey dhamaan shacabka islaamka, shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland munaasabada ciida oo ah maalin qiime weyn ku leh ummadaha Islaamka.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlayey midnimada u ciidka wuxuu farta ku fiiqay in ay tahay wax lagu farxo in dhamaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland ay wada ciidaan, balse wuxuu sheegay inay jiraan dad kooban oo fara ku tiris ah oo aan ciidin kuwaasi oo uu ku tilmaamay “kuwa asagood ka harey”.
“Waxaan maqli jirey asaagaa ALLE kaa reeb,, ninkii aan maanta (Talaado shaley) ciidin oo Soomaaliya oo jooga waa asaagaa ALLE kaa reeb, asaagiisu ka harey, waxaan kaloo maqli jirey muslin qilaaf, marka dadku dhinac u bato oo uu wada ciidayo, ninkii isagu yiraahda anigu ciidi maayo oo Shiiq hebel baa ciidaya, aniguna qolo kalaan ka tirsanahay oo anigu ciidi maayo kaasna waxaan leenahay muslim khilaaf weeye”.
Madaxweynaha ayaa ka hadley go’aaiminta ciida & in isagu uu yahay imaanka guud ee dalka (Puntland), waxaana uu yiri “Ciida rasmiga ah waa maalinta la isla garto, culumada waa weyn, xukuumada, wasaarada cadaalada & diinta, aniguna aan ku dhawaaqo oo aan ahay Imaamkii dalkan loo doortey oo hogaaminaya oo Islaamka ahaa aan ku dhawaaqno, maalintaasaa ciida ah waana maanta ciidu (shaley talaado).
Amaanka Puntland & dilalka
Madaxweynaha ayaa mar uu ka hadlayey dilalka ka dhacay deegaanada Puntland wuxuu farta ku fiiqay in dilalkaasi & kuwa kale ee ka dhacaya Soomaaliya inteeda kale ay yihiin kuwa ay ka dambeeyaan “Dad la soo kireystey oo caloosh u shaqeystayaal ah” .
Dadka khilaafka diiniga ah wada waa qatar cadiim waxyaalaha culimadu ka hadlayso oo ay dadka ka waaniyaan oo uu ka hadlayey Sheekh C/qaadir waxaa ka mid ah dadka dhiiga Islaamka baneystey, oo muslin khilaafka ah oo diin baan u leynaynaa leh, waxaan idiin sheegaya wax diin ah oo loo leynayo ma jiraan, waa siyaasad, waa dad la soo kireystey oo calooshood u shaqeystayaal ah, waa dad la yiri Soomaaliya yaan maamul ka hirgalin oo baabi’iya, ilaa aad ka noqotaan madax adinku oo markaasi aad albaabada u rogtaan, kuwaasi ILAAHAY garabkooda waa ka baxay, meel xun bay sii marayaan, waxaad yeelaysaan iska ilaalsha, ilaalintaasu waxa weeye xaga nabadgalyada, ha qaranina, soo sheega, qabyaalad darteed ha u qaranina, oo fuleyninimo ha u qaranina, oo waxba igama galin ha u qaranina, oo ciidamada shaqo ku leh ha ku deynina ee soo sheega”.
Faroole wuu sii hadlay wuxuuna yiri “Wixii xumaan wada haduu walaalkaa yahay, hadii wiilkaaga yahay, xitaa haduu yahay waalidkaa, oo hadii aad adigu tahay qof yar oo wanaaga garanaya waxa uu ka shaqeynayo qofka dilalka geysanaya oo siyaasadeysan oo amiga dalka wax lagu yeelayo meel kasta oo dalka Soomaaliya ka mid ah gaar ahaan gobolka aynu ku noolyahay ee Puntland waxaan ugu yeerayaa in uu ILAAHAY ku soo duwo wadada fiican”.
Madaxweynuhu mar uu la hadlayey waalidiinta & waxgaradka Puntland wuxuu sheegay in uud ugu mahadcelinayo waxgaradka Puntland isagoo sheegay in waxgaradku ay kaalin fiican ka qaateen sidii loo damin lahaa colaadaha beelaha ka dhex dhaca.
“Waxaan ILAAHAY ka baryayaa in uu umadeena quluubtooda isu soo duwo, ummada Soomaaliyeed wixii ku dhex jira oo shidaa ILAAHAy ka saaro, kuwa diinta sheeganaya oo dadka leynaya ILAAHAY ka qabto oo wixii dhibaato wada ILAAHAY dhinac ka mariyo, dhalinyarada yar yar oo iyaguna la duufsade oo ama lagu haysto qori dabada lagala taagan yahay iyaguna inay ka waantoobaanin ummada halkan degana ay awlaadooda ilaashaadan sidaan wax badan halkan ka sheegnay meelaha loogu soo gambado oo meelaha diinig ah sida dugsiyada qur’aanka, masaajidada, meelaha waxbarashada sida dugsiyada caadiga ah laftigooda dadku inay dignootaadaan, oo caruurta ilaashaadaan & dadka ay masuulka ka yihiin ayaan iyagana ugu yeerayaa” ayuu yiri madaxweynuhu.
Khudbada madaxweynaha oo dhinacyo badan taabanaysa link audio hoose ka dhageyso.